Breaking News – Voice of Myanmar
နေပြည်တော်-ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂-၂၀၂၁ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ကနေ ဝန်ကြီးအသစ်တွေခန့်ထားနေတာမှာ လစ်လပ်နေတဲ့ ဝန်ကြီးနေရာတွေကို ဆက်ပြီးရွေးချယ်နေတယ်လို့ တပ်မတော်အသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။ မကြာခင်မှာ လစ်လပ်နေတဲ့ ဝန်ကြီးနေရာနဲ့ ဒုဝန်ကြီးနေရာတွေ ကြေငြာလာနိုင်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးသိရတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေက ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ပြီး အရပ်သားအများစုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေကနေ ထိမ်းသိမ်းထားတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို မကြာခင်အိမ်ပြန်ပို့နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး နေအိမ်ကနေ ဘယ်မှထွက်ခွါခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နေပြည်တော် စည်ပင်ရိပ်သာ၂မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း သူတို့နေရပ်ရင်းတွေကို ပြန်ပို့ပြီး နေအိမ်မှာဘဲနေရနိုင်တယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်ကနေ ကြားသိရပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #နေပြည်တော်သတင်း
Breaking News, မြန်မာသတင်း, သတင်းLeaveacomment
အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး ဘာကြောင့် ရက်ရွှေ့သလဲ
ဇန်နဝါရီ ၂၉_၂၀၂၁ Voice of Myanmar တတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို အရင်ကြေညာထားတဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့အစား ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်နေ့ကို ပြောင်းလဲကျင်းပမယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာ မပြီးသေးလို့ ခုလိုမျိုး ရက်ရွှေ့လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လွှတ်တော်နဲ့ နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သိရပါတယ်။ အခုလို လွှတ်တော်ရက်ရွှေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အခုချိန်ထိ အကြောင်းကြားထားခြင်းမရှိသေးဘဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့မှာ အဆင်သင့်လုပ်ထားဖို့ပဲ နောက်ဆုံးညွန်ကြားထားချက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုတော့ အရင်ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့မှာပဲ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ #VoiceofMyanmar #VOM #အမျိုးသားလွှတ်တော်ရက်ရွှေ့
နေပြည်တော်-ဇန်နဝါရီ၂၁-၂၀၂၁ ကိုထွန်း(နေပြည်တော်) အိန္ဒိယကမှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် မြန်မာပြည်ရောက်ပြီလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိုင်းအဝိုင်းကသိရပါတယ်။ ပထမဆုံးရောက်တဲ့ ဆေးတွေကို ရောဂါကူးစက်မှုအနီးစပ်ဆုံးနဲ့ ကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းနဲ့ Volunteer တွေကို အရင် စတင်ထိုးပေးမှာဖြစ်ပြီး နောက်ရောက်တာတွေကို အသက် ၆၅နှစ်အထက်တွေကို ထိုးပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုဗစ်၁၉ကာကွယ်ဆေးတလုံးဟာ အမျိုးအစားလိုက်ပြီး တချို့ဆေးဟာ လူ၈ဦးထိုးလို့ရပြီး တချို့ကတော့ ၁၀ ဦးထိထိုးပေးလို့ရပါတယ်။ ဆေးရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကိုလိုက်ပြီး ပထမထိုးနှံပြီးသူဟာ နောက်ထပ် ၃ပတ်နေမှ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ထိုးရမှာဖြစ်သလို တချို့ဆေးကတော့ နောက် ၄ပတ်နေမှ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ထိုးရတဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အိန္ဒိယကနေ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး၀ယ်ယူတာအပြင် CEPI, GAVI နဲ့။ WHO တို့ချမှတ်တဲ့ COVAX ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်နဲ့လည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး‌ တွေ မှာယူထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ကာကွယ်ဆေးအချို့ လှူဒါန်းထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာအရေအတွက်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ည ၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ၁၃၅၇၂၁…
Breaking News, ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာရေး နဲ႔ အားကစား, မြန်မာသတင်း, သတင်းLeaveacomment
Unicode မြောက်ဒဂုံက CBဘဏ်မှာ ဓားပြတိုက်ပြီး မိုင်းထောင်သွားမှုဖြစ်ပွား ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇-၂၀၂၀ Voice Of Myanmar ရန်ကုန်မြို့၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၅)ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်းရှိ CB ဘဏ်မှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ဓားပြတိုက်ပြီး မိုင်းထောင်သွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ကနဦးသတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဘဏ်က လုံခြုံရေးကောင်လေးကို အမည်မသိလူနှစ်ဦးက သေနတ်နဲ့ထောက်ပြီး ဘဏ်အတွင်း၀င်ရောက်ကာ ပိုက်ဆံ သိန်း(၆၀၀)ယူဆောင်သွားတဲ့အပြင် ဘဏ်အတွင်းကိုလည်း မိုင်းထောင်သွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဓားပြလာတိုက်တဲ့ အမည်မသိလူနှစ်ဦးဟာ အဌားယာဉ်တစ်စီးနဲ့ ထွက်ပြေးလွှတ်မြောက်သွားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက မိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Photo Crd #VOM #voiceofmyanmar #ရန်ကုန် #CBဘဏ် #ဓားပြတိုက်မိုင်းထောင် Zawgyi ေျမာက္ဒဂုံက CBဘဏ္မွာ ဓားျပတိုက္ၿပီး မိုင္းေထာင္သြားမႈျဖစ္ပြား ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇-၂၀၂၀ Voice Of…
ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ပလပ်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ရုံးကချထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းမို့ အထူးအယူခံဆက်တက်မည် နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ ကိုထွန်း (VOM) တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့အမှုကို ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်တာမှာ အောက်ရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအတည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် အထူးအယူခံ ဆက်တက်မယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား ကြည်လင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေနတ်သမား ကြည်လင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ အောင်ဝင်းဇော်တို့ နှစ်ဦးကို မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ၂၀၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ တခြားတရားခံ ဇေယျာဖြိုး ကိုတော့…
ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပြီးသတ် အမိန့်ချမယ် နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့ကိစ္စ ၁၀/၁/၂၀၂၀ မနက် ၉း၃၀နာရီ မှာ နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။ ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား ကြည်လင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေနတ်သမား ကြည်လင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ အောင်ဝင်းဇော်တို့ နှစ်ဦးကို မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ၂၀၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ တခြားတရားခံ ဇေယျာဖြိုး ကိုတော့…
ပလက္ဝ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃-၂၀၁၉ မင္းရန္ႏိုင္(VOM) ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္(ယေန႔) နံနက္ ၈ နာရီမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုလားတန္စီမံကိန္း (ပလက္၀-ဇိုရမ္ပြီလမ္းပိုင္း) မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား၀န္ထမ္း ၄ ဦး၊ စကားျပန္ ၂ ဦး၊ စပိဘုတ္ေမာင္းသူ ၂ ဦး လိုက္ပါလ်က္ စပိဘုတ္ႏွစ္စီးနဲ႔ ပလက္၀မွ ေက်ာက္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ ဦးေဝွ႔တင္းအပါ ၉ ဦးစလုံး လမ္းမွာ ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိတယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုသူ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။ ခရီးၾကာခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေက်ာက္ေတာ္သို႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွာ ေရာက္ရွိရမွာျဖစ္‌ေပမယ့္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္အထိ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိတာ‌ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက…
မႏၱ​ေလးၿမိဳ႕၊ျပည္​ႀကီးတံခြန္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ က်န္​စစ္​သားလမ္​းနဲ႕ ၇၂လမ္​း​ေထာင္​႕က `ငါးနီ´ပဲခြဲစက္​ရံုမွာ မီး​ေလာင္​ေနပါတယ္။ မီး​ေလာင္​မႈအဆင္​့ Level2ျဖင္​့ မီးၿငိမ္​းသတ္​​ေနတယ္​လို႔ သိရပါတယ္​။
Breaking News, သတင်းLeaveacomment